Dulucda taariikhda Norwey | Safarka Absolut
Waxyaabaha ugu muhiimsan taariikhda Norwey
Rasmi ahaan, ka Taariikhda Norwey Waxay bilaabmaysaa 872 AD, sanadkii la aasaasay boqortooyada. Si kastaba ha noqotee, taariikhdeeda ayaa dib ugu laabaneysa waqti hore, laga soo bilaabo Taariikhda ilaa maanta.
Qoraalkan waxaan ku eegaynaa daqiiqadaha iyo dhacdooyinka ugu muhiimsan taariikhda ummaddan Scandinavian-ka.
1 Aasaaska Boqortooyada Norway (872)
2 Ururka Kalmar (1389)
3 Habeenkii 400 sano
4 Xorriyadda Norwey (1905)
5 Noorwey intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka (1940-45)
6 Noorway maanta
Aasaaska Boqortooyada Norway (872)
Qarnigii XNUMXaad ee AD dadkii ku noolaa Jasiiradda Scandinavian Peninsula waxay hore u caddeeyeen inay yihiin dagaalyahanno dagaalyahanno iyo aqoonyahanno khibrad leh, sidaasna ay ku bilaabeen xilligii Duulaanka Viking.
Vikings (ama Norman) waxay cabsi ku faafiyeen xeebaha Yurub oo dhan, laga soo bilaabo Islaantii Ingiriiska ilaa Mediterranean, xitaa waxay ku sii fidayeen gudaha Ruushka. Si kastaba ha noqotee, deegaanadooda asal ahaan waa lakala qeybsamay oo si isdaba joog ah ayey isku khilaafeen.
Sverd i Fjell, "Seefaha Buurta". Taallo lagu xusayo Dagaalkii Hafrsfjord iyo dhalashadii Boqortooyada Norway.
Wax walba way isbadaleen mahad shaxanka Harald I ee Norwey, oo sidoo kale loo yaqaan "Harald the Fair" ama "Harald the Blond." Hogaamiyahan Viking-ka wuxuu bilaabay dagaalo xiriir ah oo uu la galay qabiilooyinka deriska ah. Guushii ciidamada badda kadib dagaalka hafrsfjord In 872, wuxuu aasaasay Boqortooyada Norwey, kaas oo markaa ku sii fiday ama ka sii yaraaday dhulka hadda jira ee koonfurta ee Norway iyo Sweden.
Ururka Kalmar (1389)
La Midowga Kalmar waxay ahayd daqiiqaddii sharafta ugu badnayd ee boqortooyooyinkii Scandinavianka.
MargaritaGabadha Boqorka Sweden, waxay noqotay Boqorada Norway sanadkii 1372 kadib dhimashadii ninkeeda, King Haakon VI, iyo kadib Boqorada Denmark kadib geeridii dhiciseed ee wiilkeedii Olaf, oo ahaa dhaxal sugaha saxda ah ee boqortooyada. Ka dib markii uu mideeyay labada taaj ee maamulkiisa, kama uusan labalabeyn inuu sheegto xuquuqdiisa ku aadan carshiga Sweden. Taageerayaashiisa waa inay la kulmaan militari ahaan kuwa raacsan kan kale ee damaca ugu jira carshiga, Albert ee Mecklenburg, oo uu kaga adkaaday dagaalka alse (1389).
Khariidada dhulalkii uu ka talin jiray Midowgii Kalmar
Midowgii saddexda boqortooyo ayaa si rasmi ah ula soo saxiixday heshiiska Midowga Kalmar. Gobolkan cusub wuxuu mideeyay dhamaan dunida Scandinavianka: Sweden, Norway, Finland, Denmark, Iceland iyo Faroe Islands.
Habeenkii 400 sano
Iswiidhan waxay ka baxday Kalmar Union sanadkii 1523, inkasta oo Norway iyo Danmark ay midoobeen ilaa horaantii qarnigii XNUMXaad. Si kastaba ha noqotee, midowgan Norwey dadkii ku noolaana waxaa ku hadhay xaalad liidata marka loo eego Danmark. Xaqiiqdii, caasimadda waxaa laga aasaasay Kobanheegan.
Muddadan hoos u dhaca waxay socotey ku dhowaad afar qarni, waana sababta loogu yaqaan taariikhda Norwey 'Habeenkii 400 sano'.
Sanadkii 1814, dagaalladii Napoleonic ee burburiyey qaaraddii hore, ayaa Heshiisyada Vienna taas oo Danmark ka lumisay kantaroolkii Norway. Si kastaba ha noqotee, waddanku ma uusan la soo noqon madax-bannaanidiisii, laakiin wuxuu u gudbay gacanta Sweden.
Xorriyadda Norwey (1905)
Dareenka qaran ee Noorway ayaa si tartiib tartiib ah u soo ifbaxay qarnigii 1905-aad oo dhan markii diidmada taajka iswiidhishka uu sii kordhay. In kasta oo ay jireen dhacdooyin rabshado wata iyo xilliyo xiisad ah, haddana dhibaatadu ma sii kordheen oo ugu dambayntii waxaa si nabadgelyo ah loogu xalliyay XNUMX iyadoo la isugu yimid shirkii a raali ahaansho.
Sidan oo kale, dadka noorwiijiga ah waxay u suurta gashay inay si xor ah u doortaan mustaqbalkooda isla markaana sharad ku galaan sameynta boqortooyo iyaga u gaar ah. Boqorka cusub, Haakon VII, waxaa doortay baarlamaanka Norway. Waxay ahayd dhalashada gobolka casriga ah ee Norwey, boqortooyo baarlamaani ah iyo boqortooyo leh caasimad Oslo.
Noorwey intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka (1940-45)
In kasta oo xaqiiqda ay Norwey ku dhawaaqday inay tahay dal dhexdhexaad ah bilowgii Dagaalkii Labaad ee Adduunka, 1940-kii Naasigii Jarmalka ayaa ku soo duulay dalka iyadoo ay macquul tahay inuu ugu dambeyn ku biiro xulafada Allies.
Duullaanku wuxuu ahaa mid aad u dhaqso badan, maadaama gargaarkii milatari ee yaraa ee reer Norway ay ka heleen Ingiriiska uusan ku filnayn. Ku qabsashada Jarmalka Noorway waxay socotey ilaa Meey 1945. Muddadan, waxaa abuurmay dhaqdhaqaaq iska caabin ah oo gudaha ah, oo uu hoggaaminayey King Haakon VII laftiisu.
King Haakon VII iyo qoyskiisa maalintii xorriyadda (May 17, 1945).
Dagaalkii ka dib, Norway waxay dib ula soo noqotay madax-bannaanideedii waxayna si firfircoon uga qayb qaadatay siyaasadda caalamiga ah, iyadoo la kaashaday abuuritaanka UN-ka iyo ka mid noqoshada NATO 1948.
Hantida laga helay dhiig-miirashada hydrocarbons (saliid iyo gaas) Badda Norwey iyo Badda Woqooyi waxay si weyn u beddeleen dhaqaalaha waddanka. Tobaneeyo sano gudahood Noorway waxay ka soo gudubtay inay yeelato dhaqaale yari ku dhisan kalluumeysiga iyo beeraha oo ay noqotay mid ka mid ah quruumaha ugu horumarsan Yurub.
Noorway waxay sameysay nidaam siyaasadeed iyo mid bulsheed oo ay amaantaan ku dhowaad wadan kasta oo aduunka ka tirsan. Tusaale inay suurtagal tahay in la gaaro ujeeddooyinka labada ah ee barwaaqada dhaqaale iyo caddaaladda bulshada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Waxyaabaha ugu muhiimsan taariikhda Norwey
Norway waa goolhayaha reer Argentine ee ka baxsaday xabsiga
Ujawaab inaad sifiican uguxirxidho mexico iskuulka
jaamacada los angeles califonia dijo
Norwey, oo ah dal saliid ah, ayaa caan ku ah fiiqfurka ku yaal Matxafka Olombikada ee Thalidomine
Waa waddanka ugu qanisan xagga saliidda kaalinta 1-aad, waxaana ku soo xiga Sweden
Jawaab Jaamacadda Los Angeles California
Asalka La Candelaria, xaafada taariikhiga ah ee Bogotá